Midowdo Barzakh - midowdo qoruhu aan khasaaro xogta
> Resource > Utility > Sidee inay la midowdo qoruhu aan Loss Data
Sidee inay la midowdo Disk adag ka eryi xijaab aan la tirtiro xogta?
waxaan ka dhigay 7 qoruhu si aan HDD iyo hadda aan u baahanahay oo kaliya 4, sidaa darteed waa suurto gal inaad ku biirto 3 qoruhu galay 1 oo aan formatting ama la tirtiro xogta, sababtoo ah dhammaan maqaal qoruhu ugu xoogaa yihiin buuxa iyo anigu ma doonayo in aan iska xogta. - Arnold
Waxaa sidan oo kale in uu yahay midowdo qoruhu si fudud oo dhaqso oo aan khasaaraha xog kasta! Iyadoo tababaraha disk ah, waxaad xor u tahay dib u soo kicin files Risaalo oo dhan si gooni gooni ah ka dibna tirtirto Risaalo iyo meel saaro in midkiinba midka kale, ka dibna ku rid aad files gurmad ku Halkan aynu qaadan Spotmau PowerSuite 2011 -. Management digsi in ay isu geeyo qoruhu .
Hel Management Disk halkan.
Ka dib markii socda barnaamijka aad kombuutarka, geli Management digsi oo ka dhacay Bilow hanad ah Barzakh, si ay u bilaabaan shaqadaada xijaab biirtay.
Simple 3 hits si uu u dhameystiro isku darka Risaalo ::
1. Dooro disk iyo xijaab in aad rabto inaad ku biirto xijaab kale.
2. Click Management Barzakh> darsamaan.
3. Hit doorasho ku milmaan aad rabto in aad ka.
Haddii aad rabto inaad ku biirto Risaalo ka mid ah disk adag dibadda, xiro qalabka aad la computer ka iyo waxa ay ka heli List Disk barnaamijka. Oo markaasuu joogsaday shuqulkii bidix waa isku mid sida kor ku xusan. Marka hawsha u dhammeeyey, ka kooban qoqobkii aad rabto inaad ku biirto la dhaqaajin doonaa gal ah gudahood Risaalo kale. Oo waxaa laguu oggol yahay in ay ku milmaan qoruhu in ay yihiin soo socota in kasta oo kale, ama ikhtiyaarka u aheyn. Qoruhu waxaa hagaajiya warqad magaca on this ee Maamulka Disk barnaamijka.
Ha midowdo laba maqaal qoruhu nidaamka qalliinka ama laba maqaal qoruhu Tifaftirayaasha.
midowdo laba maqaal qoruhu NTFS ku xiga, waa in ay noqon nooca version isku mid ah iyo leedahay tirada cluster isku mid ah.
KU SAABSAN NTFS
Nidaamka File New Technology (NTFS) waa la heli karo by Windows NT / XP / 2000 / Vista. NTFS wuxuu qaadanayaa kooxahaasi si loo badbaadiyo files xogta; Si kastaba ha ahaatee, clusters'size ah kuma xirna baaxadda qoqobkii ama disk. Size cluster A waa u duqeeyey sida 512 bytes sidoo kale la cayimay karaa, iyadoo aan loo eegayn in xijaab waa 5 GB ama 500 MB. Isticmaalka kooxahaasi yar ma aha oo kaliya kaa caawinaysaa in aad hoos u qadarka disk meel gaboobeen, laakiin hoos u soo celineysa ee files, xaalad halkaas oo files ama xogta waa jajaban yihiin ka mid ah kooxahaasi noncontiguous badan ilaa, taasoo keentay in helitaanka a gaabis file in ay soo gudbiyaan. Sababta oo ah waxa ay awoodaan in ay isticmaalaan kooxahaasi yar, NTFS sameeyaa si aad u wanaagsan oo ku saabsan drives waaweyn.
Ogow badan oo ku saabsan Spotmau PowerSuite 2011
Buy Spotmau PowerSuite 2011 ( $ 39.95)
Sida loo Barzakh, digsi ka Hard Disk Maamulaha ah Barzakh,
Siyaabo kala duwan oo ay u dayactir maqan DLL Files